कोरोनाविरुद्ध तयार खोप ९०% प्रभावकारी, मानवताकै ऐतिहासिक दिन भएको घोषणा! पूरा हेर्नुस ? - News21Nepal
कोरोनाविरुद्ध तयार खोप ९०% प्रभावकारी, मानवताकै ऐतिहासिक दिन भएको घोषणा! पूरा हेर्नुस ?
November 9, 2020 November 9, 2020 news21nepalLeaveaComment on कोरोनाविरुद्ध तयार खोप ९०% प्रभावकारी, मानवताकै ऐतिहासिक दिन भएको घोषणा! पूरा हेर्नुस ?
लण्डन । फाइजर र बायोएनटेकले उत्पादन गरेको खोपले परीक्षणमा ९० प्रतिशतसम्मको प्रभावकारिता देखाएपछि संसारभरका मानिसहरु उत्साहित भएका छन् ।
यसलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको विकासमा नयाँ सफलता हात परेको रुपमा लिइएको छ । खोप उत्पादनकर्ताहरुले खोपको अन्तिम चरणको परीक्षण निकै प्रभावकारी देखिएको भन्दै यही महिना(नोभेम्बर)को अन्तदेखि नै आपतकालीन प्रयोगमा ल्याउन सकिने बताएका छन् ।
यो उत्पादक कम्पनीले बनाएको खोप ६ देशका ४३ हजार ५०० जनामा परीक्षण गरिएको थियो । यो क्रममा कुनै पनि प्रकारका गम्भीर साइड इफेक्ट देखिएको छैन ।
फाइजरका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. अल्बर्ट बोलाले विज्ञान र मानवताका निम्ति यो महत्त्वपूर्ण दिन भएको बताए । उनले कोभिड १९ को फेज ३ को यो खोप ट्रायलको नतिजाले कोभिडलाई जित्न सकिन्छ भन्न प्रारम्भिक रुपमा प्रमाणित गरेको बताएका छन् ।
हालसम्म विश्वभर दर्जनौं कोभिडविरुद्धका खोपहरु परीक्षणको अन्तिम चरणमा छन् । विज्ञहरुका अनुसार तीमध्ये यसले भने राम्रो सम्भावना र नतिजा देखाएको छ । यो खोपमा प्रयोगात्मक विधि प्रयोग गरिएको छ, जसमा मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई तयार पार्न भाइरसको जेनेटिक कोडलाई इन्जेक्सनमार्फत् प्रवेश गराइन्छ ।
Tagged कोरोनाविरुद्ध तयार खोप ९०% प्रभावकारीमानवताकै ऐतिहासिक दिन भएको घोषणा! पूरा हेर्नुस ?
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पूर्वमाओवादी खेमाको सन्देश : यसपटक साथ दिन सक्दैनौं, हेर्नुस् यस्तो छ खेमा को तयारी , नया पाटी घोषणा कहिले ? पूरा हेर्नुस !
तपाईंको आजको दिन कति शुभ ? आजको पूरा रासिफल हेर्नुस ।
२४ घण्टामा २ हजार 225 जना मा कोरना संक्रमण पुस्ठी । कुन ठाउमा कति थपिय पूरा हेर्नुस?
डिसेम्बरसम्म जोखिम समूहमा कोरोना भ्याक्सिन आइपुग्न सक्छ ? यस्तो छ तयारी, पूरा हेर्नुस।
November 11, 2020 November 11, 2020 news21nepal
जाडो मौसममा लसुन र मह मिसाएर खाँदा शरीरमा पुग्छन् यी फाइदा, पूरा पढ्नुहोस ।
December 8, 2020 news21nepal